घनश्याम ढकालबारे समालोचना कृति | NepalDut
पुस्तक विमोचन तथा परिचर्चा कार्यक्रममा बोल्दै प्रा.डा. ताराकान्त पाण्डेयले घनश्याम ढकाल माक्र्सवादी समालोचना र भौतिकवादी चिन्तनका क्षेत्रमा प्रतिबद्ध र प्रस्ट लेखक भएको चर्चा गरे । ‘ढकालको मूल व्यक्तित्व नेपालको प्रगतिवादी आख्यान र निबन्धमा स्थापित छ,’ पाण्डेयले भने, ‘जनयुद्धपूर्व र जनयुद्धको उत्कर्षका बेलामा वर्गसंघर्षलाई केन्द्रीय कथ्य बनाएर ढकालले शक्तिशाली कथा र उपन्यास सिर्जना गरेका छन् ।’
पाण्डेयले समानान्तर साहित्यिक धाराका कृतिहरूको समालोचना गर्ने क्रममा पनि ढकालले महत्वपूर्ण योगदान दिएको स्मरण गरे । सरुभक्तरचित ‘पागल बस्ती’ उपन्यासबारे प्रगतिवादी धाराबाट ढकालले नै सशक्त आलोचना पेश गरेको पाण्डेयले बताए । ढकालको सम्पूर्ण व्यक्तित्व झल्कने गरी पुस्तक तयार पारेको भन्दै प्रा. पाण्डेयले समालोचक सुकुम शर्माको प्रशंसा गरे ।
समालोचक निनु चापागाईंले नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनमा वैचारिक तथा सांस्कृतिक विचलन देखिएको सन्दर्भमा ढकालजस्ता आलोचकहरूको अभाव खड्किएको औंल्याए । चापागाईंले भने, ‘हाम्रो सांस्कृतिक आन्दोलनमा सबैभन्दा डरलाग्दो गरी वैचारिक विचलन देखिएको छ । यो विचलनको क्रम अझै बढ्दै जाने संकेतहरू देखिएका छन् । यस्तो बेलामा आन्दोलनलाई घनश्याम ढकालजस्ता निर्भीक आलोचकहरूको खाँचो छ । तर, अहिले कम्युनिस्ट आन्दोलनमा न आलोचनाको संस्कृति छ, न कोही आलोचक छ । हाम्रो आन्दोलनले बौद्धिक दासहरू मात्रै उत्पादन गरिरहेको छ ।’